Maxaad kala soctaa Caqabadaha uu la kulmi karo Madaxweynaha DDSI Mustafe Cagjar? – Xeernews24
Maxaad kala soctaa Caqabadaha uu la kulmi karo Madaxweynaha DDSI Mustafe Cagjar?
– Ciidanka oo aan loo diyaarinin nidaam qumman oo lagu hagi karo, laguna beddeli karo dhaqanki hore ee lagu eedeeyo inay lahaayeen ee ku saleysnaa dilka, dhaca, boobka iyo ku tumashada xuquuqda aadanaha.
Xidhiidhka Dawladda Federaalka
Dhinaca siyaasadda la xidhiidha, xidhiidhka uu maamulka madaxweyne Mustafe a yeelanayo Dowladda dhexe waxyaabaha madmadowga soo gelin karo oo u baahan in aad looga taxaddaro sida go’aannada ay ka midka yihiin magaca deegaanka ee la beddelay DDSI loo beddelay DDS, heesta astaanta deegaanka u ahayd oo lagu beddelay tii hore ee ahayd Soomaaliyeey Toossoo Toossoo iskku tiirsada…, Calanka degaanka ee la beddelay iwm.
Jabhadda ONLF oo ah jabhadda keli ee hubeysneyd ee muddo dagaal kula jirtay dowladda Itoobiya si ay gobolka ay Soomaalidu degto oo hoos taga Itoobiya ay “uga xoreyn lahayd”, iyo ururrada mucaaradka ee ka abuurmay cadaadiska maamulka Cabdi Maxamuud Cumar sida Dulmidiid iyo SRAJ waxay doonayeen iney maamulka Cabdi markay ka takhalusaan ay xilka iyagu la wareegaan.
Waxaana isbahaysi ku heshiiyey ururrada Dulmidiid iyo SRAJ oo madaxweyne Mustafe uu ka tirsan yahay iyaga oo haddana aad ugu kala aragti duwanaa xagga aragtida mucaaradnimada, misna ONLF waxay kaga duwan tahay ayadoo dooneysa iney gobolka gabi ahaantiisba uu madax bannaani ka qaato Itoobiya.
Xisbiga talada deegaanka haya ee X D SH S I oo isaguna siyaasadda deegaanka miisaan ku leh ayaa ka mid ah dhinacyada loollanka siyaasadeed ee adag uu ka dhaxeeyo.
Haddaba, dhinacyadan siyaasadeed haddii uusan madaxweynaha sida ku habboon ula dhaqmin, qaab dhismeedka dowliga ee la dhisi doonana aan si buuxda looga qayb gelinin, waxaa adkaaneysa iney xaaladda siyaasadeed ee deegaanka degto, waxay taana ka mid ah caqabadda uu madaxweynaha la kulmi karo haddii uusan sida ugu munaasabsan u maareynin.
Isku dhacyada soo noqnoqda Oromada iyo Soomaalida
Dhowrki sano ee u dambeeyey qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo derisnimo qarniyo badan ku soo wada noolaa ayaa waxaa ka billaabatay colaad daba dheeraatay oo ka duwan khilaafki horay labadaasi qowmiyadood u dhex mari jiray.
Haddaba dhibaatooyinka qowmiyadahaasi oo sanadihii ugu dambeeyey ahaa kuwa siyaasadeysan, sidii loo joojin lahaa, labada shacab ee xadka dheer wadaagana dib looga walaaleyn lahaa, ayaa waxay ka mid tahay caqabadda uu wajihi karo madaxweynaha cusub maxaa yeelay Soomaalida waxay tirsanayaan in dad badan laga laayey, dhulna laga qabsaday, Oromaduna waxay aaminsan tahay inuu dhul ka maqan yahay, Boqollaal kun oo qowmiyaddaasi ka tirsanna deegaanka laga soo barakiciyey oo hantidooda laga dhacay.
Labadaasi aragti ee kala fog isku keenidooda oo ah mid aad u adag ayaa waxay ka mid noqon kartaa caqabadaha uu wajihi doono madaxweynaha Cusub.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/cag-jar.jpg 960 540 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-24 17:58:102018-08-24 17:58:10Maxaad kala soctaa Caqabadaha uu la kulmi karo Madaxweynaha DDSI Mustafe Cagjar?
Daawo sawirada;Qodobo Ka Soo Baxay Kulankii Abiy Axmed Iyo Soomaalida Itoobiya”arimo... Maxaa la gudboon ONLF si ay u guuleysato Iyada iyo dhulka Soomaali Galbeedba...